လာမည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပျောက်ကွယ်ကာ မိုးရွာသွန်းမှု လျော့နည်းသွားမည်ဖြ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀- မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လာမည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပျောက်ကွယ် ကာ မိုးရွာသွန်းမှု လျော့နည်းသွား မည်ဖြစ်ပြီး မြောက်ပြန်လေအေးများ ကြောင့် ရာသီဥတု ပိုအေးလာနိုင် ကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် လေ ဖိအားနည်းရပ်ဝန်း လုံးဝပျောက် ကွယ်မည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် နှင့် ၁၃ ရက်တို့တွင် ရာသီဥတု ပို အေးလာမည်ဟုဆိုသည်။
“လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (မုန် တိုင်းအကြွင်းအကျန်တွေ)ကြောင့် နောက်နှစ်ရက်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသ တွေမှာ မိုးဆက်ရွာနိုင်ပါတယ်။ လေ ဖိအားနည်းရပ်ဝန်းက မနက်ဖြန်(ဒီ ဇင်ဘာ ၁၁ ရက်)မှာ ပျောက်သွား မယ်။ မိုးပါးသွားမယ်။ မြောက်ပြန် လေအေးတွေကြောင့် ၁၂၊ ၁၃ ရက် မှာ ရာသီဥတု ပြန်အေးလာဖို့ ရှိပါ တယ်” ဟု မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးလှထွန်းက ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် ပြောသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မိုးရွာသွန်းမှု များဖြစ်ခဲ့ပြီး လာနီညာကြောင့် ရာ သီဥတု စွတ်စိုခြင်း၊ အရှေ့လေပွေ လှိုင်းများ၊ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း များ ဖြစ်ပွားနေရခြင်းဖြစ်သည်။
“လာနီညာ သက်ရောက်မှုက တော့ လက်ရှိလည်းဖြစ်နေတဲ့ သ ဘောဖြစ်နေတယ်။ အရှေ့လေ အား ကောင်းတယ်။ လေပွေ လှိုင်းတွေဖြစ် လာတယ်။ လာနီညာရဲ့သက်ရောက် မှုကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအထိ ရှိနေမယ်။ အားတော့နည်းပါတယ်” ဟု ၎င်း က ဆက်လက်ပြောသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်အထိ ခန့်မှန်း ချက်များအရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်း ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ နေပြည်တော်၊ ဧရာ ၀တီတိုင်းဒေ သကြီးနှင့် ကရင်ပြည် နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွာရန်ရွာနှုန်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် မိုးလေ ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာန၏ ညနေ ၄ နာရီ ထုတ်ပြန် ချက်အရ သိရသည်။
(၆၉)နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူအခွင့်အရေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး??
သေဆုံးကြောင်း သတင်းမှား ပျံ့နှံ့စေခဲ့သူကို မာရာဒိုနာ ဆုငွေထုတ် ရှာဖွေ